Clash Royale 2.9.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.9.2 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား နည္းဗ်ဴဟာ Clash Royale
Clash Royale ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ! Royale ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကစားရန်အခမဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့သို့သော်အချို့ဂိမ်းပစ္စည်းများလည်းအမှန်တကယ်ငွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်အသုံးပြုချင်ကြဘူးဆိုရငျ, သင်၏ Google Play Store app ကို၏ setting တွင်ဝယ်ယူမှုများအတွက် password ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို set up ပေးပါ။ ဒါ့အပြင်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီကျွန်တော်တို့ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအောက်တွင်, သင် play သို့မဟုတ် Royale ထိပ်တိုက်တွေ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အနည်းဆုံးအသက် 13 နှစ်ရှိရမည်ဖြစ်သည်။
Clash Royale အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Clash Royale အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Clash Royale အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
latestapk စတိုး 50.88k 20.42M
Clash Royale ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Clash Royale အခ်က္အလက္
လက်မှတ် SHA1: 2E:18:D3:F8:72:6B:1D:E6:31:32:27:16:51:8F:B2:AE:C2:EB:EB:9E
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Supercell
Clash Royale APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ